gvSIG: Gajes ee tan iyo xirfadaha kale - Geofumadas
Koorsooyinka soo celinta
Koorsada cilmiga geology
Maktabad bilaash ah
gvSIG: Gajes of this iyo xirfadaha kale
Ogast, 2009 GvSIG, qgis
Qalabka lacag la'aanta ah ee ay soo baxeen waa mid xiiso badan, dhowr sano ka hor, oo ka hadleysa GIS lacag la'aan, waxay u egtahay sida UNIX, codka Geek iyo heerka aaminaad la'aanta ee cabsida aan la aqoon. Dhamaan wixii badalaya isbeddelka kala duwan ee soo maray oo aan ku dhisneyn oo keliya dhismaha caadiyan la rajeynayo, laakiin istraatijiyado cusub oo lagu falanqeynayo, imtixaan iyo isdhexgelinta sirdoonka wadajirka ah ee ku saleysan is-dhaafsiga. Heerarka OSGeo iyo OGC waa natiijooyinka baaluqa.
Waxaa dhacaya hadda aad kalsooni aan ku talin karaa xal il furan in ay yihiin wax ku ool (QGis ama gvSIG in la siiyo laba tusaale), waxaa jira noocyo kala duwan oo uu ka soo xusho, inkastoo aan la soconaa in dhowr sano ka badan la joojin doonaa ama ku biireen hooska kuwa ugu sii jiri kara (tusaale ahaan xaaladaha Qgis + Grass iyo gvSIG + Sextante). Yaa ka badbaaday arrinta waa in la tixgeliyaa si dhab ah maanta, maxaa yeelay, daacad leedahay way xaddidan, xajinta software GIS hoos hab il furan ku salaysan yahay tiirarka sida technology, ganacsiga iyo bulshada.
Farsamada casriga ah mararka qaarkood waa mid la xakamayn karo, ama ugu yaraan waxay u muuqataa inaanan ka baqaynin xawaaraheeda waalan ee samaynta horumarka oo la joojiyo daqiiqado kasta 5. Laakiin waxaan barannay inaan fahanno, in tani ay tahay habka lagu nadiifin karo marxaladda iyo codsiyada leh dhibaatooyinka sii jiritaanku ka baxayo jidka, inkasta oo ay u xanuun badan tahay kuwa aaminka ah. Si aad u bixiso tusaale Ilwis, in wax walba iyo mudnaantiisa, waxay ku kacaysaa inuu ka tago Visual Basic 6.
Horumarinta dhaqaale, ama waxa aan ugu yeeray ganacsiga, ayaa si la yaab leh u socdey. Hadda waxaa jira mashaariic badan oo ay taageerayaan iskaa wax saafi ah, iyada oo aasaaska, mashaariicda si rasmi ah u la aasaasay ama xataa badhamada fudud "shaqeeyaan via Paypal". Heerkan marka la eego kiiska gvSIG waa qadarin, qayb ahaan a mashruuc weyn guuritaanka barnaamijka bilaashka ah, wuxuu leeyahay maaliyad dhaqaale oo si wanaagsan loo qorsheeyay.
Laakiin joogtaynta bulshada waxay u egtahay in ay tahay xuddunta ugu adag ee lagu xakameyn karo, sababtoo ah maaha oo kaliya waxay ku xidhan tahay "abuuraha" laakiin sababtoo ah waxay saameyn weyn ku leedahay beeraha teknoolajiyada (labada dhinacba) waxayna ku adkaan kartaa in la xalliyo arrinka maaliyadeed. Khabiirada maaliyadeed iyo kuwa farsamada ayaa tababaraya akadeemiyadda, waxayna yihiin cilmi-baaris aan sax ahayn, qeexid ahaan. Fikradda "noocan ah bulshada" ayaa ka soo ifbaxaysa baahinta Internetka iyo isugudeynta isbeddellada dabiiciga ah ee ka dhalatay "bulshada"; sidaas darteed fiilka waa dhexdhexaad, u dhexeeya isgaadhsiinta, waxbarashada, suuq-geynta, tiknoolajiyada iyo wax walba oo la xiriira dhar-maskaxeedka bulshada.
My ixtiraamka u ah kuwa ka danbeeya line this, leh mashruucyo sida gvSIG, kuwaas oo filanaya ee caalamiga ah waa mid aad u dagaal badan. Waa in aan qiro in uu yahay mid ka mid ah mashaariicda ah in aan u sii haysanayo jaceylka naseexeeyaan (kale oo aan ahayn perquisites ee shaqada), waxaan aaminsanahay in ay wax badan ma aha oo kaliya in warbaahinta Hispanic (oo iniinahoodu ku dhex jiraan waa adag).
Mid ka mid ah line of dhidibka this (iyo kan keliya ciyaari doonaa maanta) waa mawduuca "daacad user" iyada oo loo marayo kala beddelashada macluumaadka. Si loo qiyaaso tan waa inay noqotaa mid aad u adag, sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa in aan sifudud ka ahaado jimicsiga fudud:
-Waxbarashada waxaa laga helaa bulshada.
- Qofka isticmaala daacad u ah software, oo jecel inuu isgaadhsiiyo, ayuu wax ka qoraa.
-In jawiga bulshada, dhammaan dadka isticmaala daacad u ah software, ayaa ka qayb qaadan doona Wikipedia.
Waa macquul ahayn, waan ogahay, laakiin waxaan doonayaa in aan ku riday tusaale ah, waayo, in kastoo Wikipedia waxaa si balaadhan looga cambaareeyey aqoonyahannada sida il fideligna, ay ka kooban tahay oo maalin kasta uu noqdo tixraaca ugu horeysay oo kaalin muhiim ah in xidhiidh user-raadinta-content.
Sidaas daraaddeed waxaan bar billow ah loo isticmaalo bogga "nidaamka macluumaadka juqraafiyeed" ka dibna waxaan u tegey inuu kasta oo ka mid ah bogagga 11 barnaamijyada iyo waxaan tirin tirada erayada waxaa jira, ka dambeeyaan si ay tixraac category.
Ku dhowaad kalmadaha 5,000 ee isku dara, natiijadu waa sida soo socota:
GvSIG + Sextant
Qgis + Grass
Qalabaynta Khariidadda Guud
U fiirso in wadarta GvSIG + Sextante ay qaadato
21%, ma ahan wax la yaab leh, haddii aan xusuusanno in kuwani ay ahaayeen mashruucyo badan oo u wareejiyey dukumintiyada habaysan ee macluumaadka boggooda rasmiga ah, waxay ku maalgeliyeen nidaaminta nidaamka, buug-gacmeedka, liisaska isticmaalaha iyo dadaal kale oo badan oo caalami ah.
Waxaan sidoo kale arki karnaa in QGis + Grass looga tegayo, faafitaanka ugu xooggani ma ahan mid dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah Hispanic, inkasta oo Grass laga yaabo inuu yahay kii ugu da'da yaraa ee Open Source GIS ee weli nool.
Tani waa mawduuc ku salaysan kalsoonida oo ku salaysan isku dheelitirnaan, iyo aragtida kaliya ee Wikipedia ah. Sida aan aragno, iyo qanacsanaanta, gvSIG + Sextante waxay leeyihiin saameyn muhiim ah oo ka jirta deegaanka Hispanic. Waxaa suurtagal ah in aan aragno habdhaqan la mid ah shabakadaha bulshada, blogs, wargeysyada kombiyuutarka iyo wada-xaajoodyada, inkastoo, dabcan, tani waxay dhalinaysaa masuuliyad ka saaran bulshada.
Laakiin xaqiiqda ah "khatarta noogu jirta" ayaa nagu hoggaaminaysa su'aalaha la xidhiidha isgaadhsiinta, ha isku dayin inay soo jeediso in aanu khabiir ku nahay mawduuca sii jiritaanka. Waxay qayb ka tahay "bulsho", waxay yihiin falcelinta guud ee kuwa aan rajeyneyno iimaan weyn ee mashaariicda cabbirkan (inkastoo, waxaan qirayaa, xaq uma lihin codka).
Waxa suurto gal ah waxaa lagama maarmaan ah in ay fiiro gaar ah u faafinta macluumaadka, kaas oo la sifeeyo iyada oo channels kala duwan ee kor loogu initiative (sida ay dhacdo Geomatics Free Venezuela) ama mid aan toos aheyn liiska qaybinta in ay noqdaan isgaarsiinta runta aan rasmi ahayn iyo in la abuuro Filashooyinka Tani iyo nitpicking dheeraad ah waxaa loo qabanqaabiyaa dhex siyaasadaha xidhiidhka hay'adaha, oo waa aqoonsado "channels bulshada" iyo ka gees ah labada, si loo hubiyo joogtaynta in.
Waxaa ku haboon in dib loo eego sida bulshada uu jawaab ka celiyo faafinta, sababtoo ah bulshada waa element nool, waxbay ushafeeci idanka eg a in dadka dhaqanka, sameynayso, ayaa qaba, ayaa dareensan, hadlaa, ayuu qoray wargayska, cabasho, ku faraxsan yahay iyo dhammaan ayuu ka sarreeyaa leenahay rajooyin ee mashruuc Tusaale ah sida rajada loo abuuray:
-Waa maxay xun ee gvSIG 1.3, oo aan horey u aragay gvSIG 1.9
-Waxaa qalad u leh gvSIG 1.9: maxay tahay mid aan degganeyn
-Waa maxay waxa xun ee aan degganeyn: Ma garanayno goorta ay noqon doonto
- Moment: Waxay u muuqataa in ugu dhakhsaha badan ay horey u noqon doonto.
- Marka ay noqon doonto ...
Waxaa lagama maarmaan ah in dib loo eego mawduuca bulshada, mashruucan oo weyn, oo leh heer caalami ah, iyo dhaqamo kala duwan. Isgaadhsiinta joogtada ah ee hab rasmi ah marnaba ma dhicin, haddii ay gacan ka gaysato sii jiritaanka bulshada.
Ugu dambeyntii boostada asalka ah ee igu soo celisay si aan u taabto mowduucii aan u baahnayn in la tirtiro, ka dib markii bacaha ay ku dhow yihiin wax aan suurtagal ahayn, iyo nalka cusub ee aan ku habboonayn dharka uu huwan yahay.
blog Grass GvSIG OS QGIS
Post Previous«Previous Maalgelinta Horumarinta Magaalooyinka
Post Next Ku beddel sawirrada vectorNext »
Jawaab uga tag Jooji jawaabta
cinwaanka email aan la daabacin doonaa.
Boggani wuxuu isticmaalaa Akismet si loo yareeyo spam. Baro sida xogtaada faallooyinkaaga looga shaqeeyo.
Dhammaan koorsooyinkaKoorsooyinka ArcGISKoorsooyinka Dhismaha ee BIMKoorsooyinka Madaniga ah 3DKoorsooyinka Electromechanics ee BIMKoorsooyinka Qaababka BIMKoorsooyinka ETABSKoorsooyinka soo celintaKoorsooyinka QGIS
Faahfaahin ka eeg
#BIM - Koorso dhameystiran oo habka BIM ah
Koorsadan horumarsan waxaan ku tusayaa talaabo talaabo sida loo meel mariyo nidaamka BIM ee mashaariicda iyo ururada. Oo ay ku jiraan cutubyada ...
Arag inbadan ...
#BIM - Koorsada Revit-ka Autodesk - fudud
Sida ugu fudud ee aad u aragto qof khabiir ah oo horumarinaya guri - tallaabo tallaabo tallaabo Baro AutoDesk Revit hab sahlan….
#BIM - Koorso Naqshadeynta Qaab dhismeedka iyadoo la adeegsanayo Qaabdhismeedka Robotka AutoDesk
Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan adeegsiga Falanqaynta Dhismaha Robot ee qaabaynta, xisaabinta iyo qaabeynta dhismayaasha la taaban karo iyo bir ...
Gaadiidka dhabta ah ee goobtan
Qaabka 2.5D inuu matalo sifooyin badan
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu fiican GIS
Waa maxay khariidadu?
Hagaajinta wanaagsan ee muuqaalka pixel
Caqabadaha ka horjoogsada dareemaha fog ee dayax gacmeedku inuu noqdo mid baahsan
Copyright © 2020 Waxaad egeomates
3D Gaar ahaaneed Rayid ah - Dib u eeg
32 saacadood oo fiidyow ah - 100% khadka tooska ah
Baro ArcGIS Pro - Easy
Luqadaada - 100% internetka